Emailvision Na-aga n'ihu na SmartFOCUS | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 14, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọtụtụ afọ gara aga, arụrụ m ọrụ maka nnukwu ụlọ ọrụ akpọrọ ASTECH InterMedia na Denver, Colorado. Companylọ ọrụ ahụ bụ Premiya nchekwa data ụlọ ọrụ maka akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ na-agba ọsọ site a oké onye (na enyi) Tom Ratkovich. Laa azụ mgbe tera na-enweghị okwu, anyị na-arụpụta ma na-ewulite ụlọ nkwakọba data ahịa ọtụtụ-terabyte maka ụfọdụ akwụkwọ akụkọ kachasị n'ụwa.
Ọ bụ oge dị ịtụnanya wee duga m gaa Indianapolis ịhazi, mepee ma mejuputa teknụzụ ahịa nchekwa data maka akwụkwọ akụkọ mpaghara. Anyị na-eji ngwa ọrụ akpọrọ SmartFOCUS Viper na akwụkwọ akụkọ, site na ụlọ ọrụ Ekele. Site na mmekorita, Bruce Taylor nke Praesage wuru ezin’ụlọ na ngwa-ngwa nke na-abụghị ụwa a ma gafeela ta.
Ngwá ọrụ ndị ahụ dị elu nke na akpọtụrụ m Tom ma gwa ya banyere ha… amaghi m ihe ga - eme ọzọ! 'Slọ ọrụ Tom were ngwá ọrụ Praesage wee tinye SmartFOCUS maka ndị ahịa ya. ASTECH InterMedia zụtara SmartFOCUS mgbe ahụ - nnukwu ọganihu maka ụlọ ọrụ US.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, site na mmekọrịta anyị na ụfọdụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ anyị na Emailvision rụkọrọ ọrụ. Emailvision bụ onye na-eweta ọrụ email zuru ụwa ọnụ onye na - agbasawanye akara ukwu ya karịrị email na ekwentị. Ha zụrụ n'oge na-adịbeghị anya Ebumnuche Ahịa iji banye n'ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọha na eze na nnukwu mbipụta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ugbu a, Emailvision na-azụ SmartFOCUS. Nke a bụ nnọọ a Nchikota! SmartFOCUS bụrịrị onye ahịa / sava arụnyere na ngwa mana ekwuputara ngwanrọ dị ka ụdị Ọrụ. N'ịbụ ndị nwere usoro iheomume ha n'oge gara aga, enwere m ike ịgwa gị na ozugbo ihu ndị ọrụ a kụrụ ahịa SaaS, ọ bụ onye na-agbanwe egwuregwu maka ụlọ ọrụ ahụ. SmartFOCUS jiri ndị na-ewu ajụjụ ajụjụ ụdị Venn mere dina wee dobe ya nke mere ka ahịa data nchekwa dị mfe nghọta dị mfe. Ejikọtara ya na mpaghara ndị a gbakọtara, ikpo okwu kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ, ebe nchekwa data dị ngwa karịa ngwa data njikọ ọzọ m jibu.
Emailvision nwere njikọ miri emi ugbu a na ụwa na ụlọ ọrụ ahịa dị elu. Ha enweelarị ahịa ịre ahịa email na azụmaahịa mkpanaka ekwentị nke kachasị mma maka ojiji ecommerce mer njikọ ndị a na nnweta ga-enye teknụzụ na akụrụngwa ndị mmadụ nwere ike ime ka ha bụrụ ọkaibe kachasị ahịa na ụwa.
Nke a bụ vidiyo na-adịbeghị anya site na otu na Emailvision, ọ dị mma ịhụ na ha ka na-ekpori ndụ!
Ọ bụ nnukwu ụwa, mana ọ dị ịtụnanya ole njikọ m nwere nke na-aga n'ihu na-arụ ọrụ m ọzọ. M na-atụ anya ịnọgide na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị a niile na ezigbo ndị mmadụ!
Nnukwu post Doug. Obi dị m ụtọ na ị masịkwara vidiyo a - tụkwuo anya n'ọdịnihu. 🙂